Iskuulka Imtixaanka Luqadda Shiinaha, Isbaanishka | Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka
Haddii barashada luuqad labaad inta lagu jiro dugsiga hoose ay qiimo weyn ugu fadhido qoyskaaga, iska qor barnaamijkayaga barashada luuqada oo ka bilaabanaya Xanaanada caruurta!
Degmadeennu waxay hoy u tahay Barnaamijka Imtixaanka Luqadda ee ugu weyn Minnesota oo ay wax ka bartaan in ka badan 2,000 oo arday oo hoose ka diiwaangashan barnaamijkeenna buuxa. Shiine waxaa lagu bixiyaa barnaamij iskuul-ka-dugsi ah oo laga bixiyo Dugsiyada Hoose ee Excelsior iyo Scenic Heights. Qiyaastii kalabar dhammaan ardayda Kindergarten-ka ee iskuul kasta waxay iska diiwaangeliyaan Imtixaanka Shiinaha iyo kala bar isqorista barnaamijka Xanaanada Carruurta ee Ingiriiska. Dhammaan macallimiinteena barta Shiinaha ee Minnetonka waa kuwa ku hadla afka hooyo.
Barnaamijkeena Immersion, 100% waxbarida fasalka waxaa lagu baraa luuqada Shiinaha laga bilaabo xanaanada ilaa fasalka 2aad. Ardaydu waxay bilaabaan Farshaxanka Luuqadda Ingiriiska iyo barashada akhriska ee fasalka saddexaad. Ardaydeenu waxay si wanaagsan ugu shaqeeyaan Ingiriisiga iyo Shiinaha. Marka la gaaro fasalka 5-aad, ardaydeena Imtixaanka Shiinaha ayaa dhibco ka keenaya sidoo kale imtixaannada akhriska iyo qorista ee Ingiriisiga sida dhiggooda ku jira barnaamijka Ingiriisiga.
Degmo ahaan, waxaan xiriir adag la la lahayn Shiinaha iyo waxbarashada Shiinaha in ka badan 25 sano. Waxaan macallimiin ku beddelan jirnay Hangzhou Luuqadda Dibadda oo aan ku barinay luqadda Shiinaha iyo dhaqanka tan iyo 1985. Waxaan ka dhisnay iskuullo walaalo ah magaalooyinka Hangzhou iyo Beijing oo loogu talagalay Dugsiga Sare, Dugsiyada Dhexe iyo Dugsiyada Hoose. Intaa waxaa dheer, waxaan is dhaafsannay ardayda heer kasta si aan u kobcino fahamkeenna una gudbinno qiyamka dhaqan ee u dhexeeya labadeenna ummadood ee waaweyn.
Maxaad Shiinaha u Barataa?
Shiine waxaa ku hadlaa shan meelood meel dadka dunida ku nool waana tirada koowaad ee luqadaha ugu horreeya. Barashada Shiinaha ayaa fursado badan oo shaqo u furi doonta ardayda heli kara aqoon fiican.
Minnetonka, waxaan ku haynaa taariikh dheer oo wanaagsan oo lagu barayo Luqadda Shiinaha. Waxaan ka mid ahayn degmooyinkii ugu horreeyay ee ku yaal Minnesota in ay bixiyaan luqadda Shiinaha oo ah luqadda adduunka sanadkii 1989. Maanta, in ka badan 750 arday (K-12) ayaa Shiine ku barta Minnetonka.
Qabanqaabinta iskuulka ee iskuulada hoose iyo sare ee Xian, Beijing iyo Hangzhou waxay ardayda u ogolaataa fursadaha isdhaafsiga dhabta ah Waxaan sidoo kale martigelinnaa macallin sarrifka ah oo ka socda Dugsiga Hangzhou ee Luuqadaha Dibadda sannad kasta. Dhanka kale, macallimiinta Minnetonka ayaa wax ku baray Hangzhou iyo Beijing.
Tan iyo markii Shiinuhu ku soo biiray Ururka Ganacsiga Adduunka 2001, dawlad-goboleedkeena iyo dawladdeena labaduba waxay ka dhigeen luqadda iyo dhaqanka Shiinaha maalgashi muhiim ah oo waxbarasho. Joogitaanka dhaqaale ee sii kordhaya ee Shiinaha ayaa kaliya ka dhigi doonta Luqadda Shiinaha mid door weyn ku leh dhaqaalaha adduunka. Xilligan, Shiinaha wuxuu hayaa qaybta ugu badan ee deynta Mareykanka wuxuuna si dhaqso leh u noqonayaa mid ka mid ah kuwa ugu awoodda badan adduunka dhaqaalaha. Ganacsiyo badan oo Minnetonka ah ayaa si joogto ah ganacsi ula sameeya Shiinaha.
Barnaamijyada Degmada /
Barashada Luqadda /